အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကို နားမလည်ဘူး။ ဂျပန်တွေတလွဲမှတ်နေကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ။ JAPANGLISH ကိုအရှုံးမပေးလိုက်ကြနဲ့နော်။ - JAPO Japanese News
အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာကို နားမလည်ဘူး။ ဂျပန်တွေတလွဲမှတ်နေကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ။ JAPANGLISH ကိုအရှုံးမပေးလိုက်ကြနဲ့နော်။
ကြာ 28 Oct 2021, 13:01 ညနေ
ဂျပန်စကားဆိုတာက ပြောနေကျဖြစ်သွားရင်တော့ တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ စကားဖြစ်ပေမယ့်၊ အဲ့ဒီထဲကမှ ဝိသေသတစ်ခုက “ခတခန” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားကမွေးစားစကားလုံးတွေကို ခတခန နဲ့ရေးရပါတယ်။
အဲ့ဒီအချက်က သတိမထားလိုက်မိတဲ့ အချိန်မှာပဲ လုပ်ထုံးတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတဲ့ ဂျပန်စာမှာဆိုရင်၊ ဟိရဂန နဲ့ ခန်းဂျိ ဆို ဂျပန်စာ၊ ခတခန နဲ့ရေးထားရင် သေချာမသိတဲ့စကားလုံးပါရင်တောင်မှ “အင်း၊ အင်္ဂလိပ်လိုမို့လို့ နားမလည်တာများလား” ဆိုပြီး သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာလား၊ ပေါ်တူဂီစာလား၊ ပြင်သစ်စာလား သဲသဲကွဲကွဲမရှိဘဲ ခတခန ပြောင်းသုံးထားပြီး၊ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ထွင်သုံးတာတွေရှိနေတာကို ဂျပန်လူမျိုးတွေက သတိမမူဘဲ အကုန်လုံးကို အင်္ဂလိပ်စကားလို့ထင်ပြီး ပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။
“အယ် ဒီလူအင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတာ ဘာမှန်း လုံးဝနားမလည်ဘူး!?”
အဲ့ဒီလိုတလွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ ဂျပန်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုသာ တတ်သွားမယ်ဆိုရင် ဆက်သွယ်ရတာ အရမ်းကို လွယ်လာမယ်ထင်ပါတယ်။
စီးကရက် (Cigarette) လေနော်။
စပိန်စကားနဲ့ ပေါ်တူဂီစကားက Tabaco ကို ဒီအတိုင်းဂျပန်စာနဲ့ရေးရာကနေ အတည်ဖြစ်သွားပုံပါပဲ။
ပျော့ပျောင်းတဲ့ဂျုံသားထဲနစ်ဝင်နေတဲ့ထောပတ်၊ ပြီးတော့ maple syrup လေးစမ်းထားတဲ့ မုန့်ကလေးကို စားရတာ လူ့ဘဝရဲ့သုခတစ်မျိုးပါပဲ
ဒါပေမယ့် ဒါက pancake လို့‌ခေါ်တာမဟုတ်လား
ဒါကတစ်ကယ်တော့ Japanese English、JAPANGLISH လို့ခေါ်တဲ့ ဂျပန်ကတီထွင်ထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပါ
ဝက်အူချောင်း (ဆော့ဆေ့ဂျ်) ပတ်ပတ်လည်ကို မုန့်နှစ်ထည့်ပြီး ဆီနဲ့ကြော်ထားတဲ့ သရေစာဖြစ်တဲ့ ဟောတိုဒေါ့ဂု
ဒါ့ကလည်း JAPANGLISH ပါ
အင်္ဂလိပ်လိုက Corn Dog ပါ
အမဲရိကန် ကိုးဟီး (アメリカンコーヒー)
သဘောက အမေရိကန်တွေကြိုက်ပြီးသောက်ကြတဲ့ နာမည်လိုမျိုးခေါ်ထားပေမယ့်၊ အမှန်ကတော့ ကော်ဖီကျဲကျဲပါ
အင်္ဂလိပ်လိုဆို Weak Coffee လို့ခေါ်ပါတယ်
အမေရိကန်တွေက ကော်ဖီကျဲကျဲကို ကြိုက်တာဟုတ်လို့လား? မသိပါဘူး။
အယ်? Pants ကအင်္ဂလိပ်စကားမဟုတ်လား? လို့တွေးမိသူတွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။
ဗြိတိန်အင်္ဂလိပ်စာမှာတော့ pants လို့ပြောလို့ရပါတယ်
ဒါပေမယ့်ဂျပန်မှာအဓိကသင်ပေးတာက အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်တာကြောင့် Under ware ကမှအမှန်ပါ။
မြေအောက်ရထားလိုင်းကို Tube လို့မခေါ်ဘဲ Subway လို့အမေရိကန်လိုပြောပြီး ဘာလို့ pants ကျမှ ဗြိတိန်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်နေရတာလဲ?
ဒါကို ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ဂျပန်မှာ ချပ်ခု လို့ခေါ်ကြပါတယ်
ဒါကတော့ 100% JAPANGLISH ဖြစ်သွားပါပြီ
အာဟုတာ ဆားဗိဆု After Service (アフターサービス)
Customer Service ကိုပြောတာပါ
ဘယ်လိုနေနေ After ကိုထည့်ချင်လည်း After Sales Support လို့ပြောလည်းရပါတယ်
ဒီ JAPANGLISH မှာဆို Service အနောက်မှာ ……ဘာရှိနေသေးလို့လဲ?
Auto + bike ပေါင်းပြီး အိုးတိုဘိုင် ဖြစ်သွားရော
လို့တွေးကြည့်မိပေမယ့် ဒါကလည်း JAPANGLISH ပါပဲ
Parking Break ကိုခေါ်တာပါ
ဒါကလည်း JAPANGLISH ပါပဲ
အရင်တုန်းက ဒီလိုမျိုး ယာဥ်မောင်းထိုင်ခုံရဲ့ဘေးမှ ပါလို့ဆိုရင်တော့ နားလည်လို့ရပေမယ့်၊ အခုကတော့ ခြေထောက်အောက်မှာ ထားထားတဲ့ကားတွေ များလာပြီဖြစ်လို့ အခုဆိုရင် ပါကင်ဂုဘုရေးခိ လို့ အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့လိုက်ပြီး ခေါ်နေကြပါပြီ။
Buffet ကိုခေါ်တာပါ။ ဘူဖေးပါ။
Scandinavian ပင်လယ်ဓားပြများဖြစ်တဲ့ ဗိုက်ကင်း ကနေလာတာလို့ထင်ရပေမယ့်၊ ဂျပန်မှာပဲနားလည်တဲ့ JAPANGLISH ပါ
ဂျပန်တွေက ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂလိပ်လိုလို စကားလုံးတွေ ထွင်ပစ်ပြီး၊ ကိုယ်တိုင်တောင်နားမလည်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေကို ဖန်တီးမိလိုက်ကြပါတယ်။
ဘာလို့ ဒီအတိုင်းသပ်သပ်ရပ်ရပ် အင်္ဂလိပ်လို မလုပ်ခဲ့တာလဲ?
ဆန်းကြယ်မှုတွေများတဲ့ JAPANGLISH ပါပဲ။ ဒီလိုအထိတောင် ဖြစ်လာမှတော့ ဒါတွေကိုလည်း ဂျပန်စာလို့မှတ်ပြီးသာ ကျက်လိုက်ကြပါတော့။
Yes ကနေ No ဖြစ်သွားတဲ့ ဂျပန်ဘာသာစကား
နှစ်စဉ်မြင်းအကောင်ရေပေါင်း ၇၀၀၀ သတ်ဖြတ်စားသောက်ခံနေရတဲ့ အခြေအနေကနေ မြင်းများကိုကယ်တင်ဖို့ jockey တစ်ယောက်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုစတင်လာ
သင်မသိသေးတဲ့ ဂျပန်လက်ဖက်ရည်များအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း